Igbo, Romans, Lesson 024 -- The Revelation of the Righteousness of God in the Atoning Death of Christ (Romans 3:21-26) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 024 (The Revelation of the Righteousness of God)
1. Mkpughe nke ezi omume Chineke na ọnwụ ịkwụ ụgwọ mmehie nke Kraịst (Ndi Rom 3:21-26)
NDI ROM 3:25-26
25 Onye Chineke setịpụrụ dị ka ihe ịjụta ọbara site n’ọbara ya, site n'okwukwe, igosi ezi omume ya, n’ihi na n’agabiga Ya, Chineke gabigara mmehie niile e mere na mbụ, 26 iji gosipụta ugbu a ezi omume ya, ka O wee bụrụ onye ezi omume. na onye ezi omume nke onye nwere okwukwe na Jizọs.
Ọbụghị naanị mmadu mmadu kpọgburu Kraist, kama Chineke hụrụ ụwa ọjọọ anyị n’anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị n’aka ndị mmehie, ebe ha maara na ha ga-egbu ya. N’agbanyeghi, na ihe omuma ya nke di n’eluigwe, o bu n’obi na onwu nke Onye Nsọ kwesiri ibu aja na aja-mmehie nye ndi mmehie nile n’oge nile. Ọbara Kraist na-asachapụ anyị mmehie niile. E nweghị mgbapụta ma ọ bụghị na ọbara nke Ọkpara Chineke aka ya dị ọcha.
N’ọgbọ anyị nke ihe ịtụnanya na mmeri nke teknụzụ, anyị amatala na iwe na ikpe nke Chineke bụ ike nọ n’ọrụ n’akụkọ ụwa, na ha dịkwa mkpa karịa ụgbọ elu, okpuru mmiri, tankị, na H-bọmbụ. Onye ọ bụla n'ime mmehie anyị chọrọ ntaramahụhụ na mkpuchi mmehie, n'ihi na n'ụkpụrụ a na-ama anyị ikpe ọnwụ, àjà mgbapụta Kraịst bụ naanị ụzọ anyị maka nzọpụta. N'ihi nke a, Ọkpara Chineke di n'an’achite ka ejiri oku n’oku n’elu ebe ịta ahụhụ n’ọkụ nke iwe Chineke. Onye na-abiakute ya n’ikwesi ntụkwasị obi bu onye ezi omume. Ọtụtụ nde mmadụ achọpụtala na ike niile nke Chineke na-arụ ọrụ n'ime ọbara Kraịst a wụsịrị. Ya mere, anyị na-akpọku gị, nwanne m nwoke, ka ị ghara ịhapụ onye ahụ kpọgidere n'obe. Kama tinye ụlọ gị, ọrụ gị, ihe gara aga gị, ọdịnihu gị, ụka gị, na onwe gị kpamkpam ka ọ ga-efesa ọbara Nwa Atụrụ Chineke, ka e wee doo gị nsọ ma chebe gị n'eziokwu nke Chineke ruo mgbe ebighi ebi. Onweghi nchedo nke ekwensu na nkpagbu nke iwe Chineke ma ewezuga obara Jizos Kraist.
Jiri obi gị mata amaokwu nke 21 ruo nke 28. Jiri okwu ọnụ gụọ ha, ma mee ka ihe ha pụtara gha n’obi gị. Mgbe ahụ ị ga-amata na ihe dị mkpa n’ihe mmụta a abụghị izi ezi nke onye mmehie, kama ọ bụ ngosipụta nke ezi omume Chineke, nke ekwuru banyere ugboro atọ n’akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ.
Chineke anyị na-ahụ n'anya ebibighị ndị mmehie n'oge gara aga, dịka iwu chọrọ. Onye ahụ nwere obi mgbaghara gbaghara ma legharia ajọọ-omume ya anya n'ihi ịhụnanya ya na ndidi ya, ruo mgbe ihe niile e kere eke ga-abịa; oge ime ka mmadụ dịghachi ná mma nye Chineke n’olu mkpu ọnwụ nke Kraịst n’elu obe. Ndi mmụọ ozi nile rejoụrịrị ọ ,ụ, n'ihi na mbilite n'ọnwụ nke Onye Kpọgidere n'obe, e mere ka ndị mmehie niile zie ezi.
Onye obula nke nekwu na Chineke n’onwe ya puru igbaghara onye obula, ma oge obula O choro, bu onye n’amaghi, ma ge nti mmadu, nke uche ya; n’ihi na Chineke abụchaghị nnwere onwe, kama o were okwu na ihe ọ pụtara dị nsọ were onwe ya, ma mee ka onye mmehie ọ bụla nwụọ. O kpughekwara na n’enwụghị ọbara na enweghị mgbaghara ọ bụla. Ọ bụrụ na e jighị Kraịst chụọ àjà, Chineke ga-ata ụta ma ọ bụrụ na ọ gbaghaara onwe ya na-emezughị ihe ezi omume chọrọ.
Emere ihe abuo na nkpagbu nke Kraist: Chineke kpuchitara ezi omume ya, me ka agu ayi n’otu oge. Onye Nsọ abụghị onye ajọ omume ịgbaghara anyị, n’ihi na Jizọs emezuola ihe nile ezi omume chọrọ. Onye Nazaret biri ndụ na-enweghị mmehie, dị nsọ na obi umeala. O nwere ike, dị ka otu onye n'ime ihe niile e kere eke, buru mmehie nke ụwa n'ihi ịhụnanya ya dị ike. Yabụ, ka anyị fee Jizọs ofufe ma hụ ya n'anya, ma nye Nna ya otuto, bụ onye họọrọ ịnwụ kama Ọkpara ọ hụrụ n'anya, kama na ọ ga-aga n'ihu na elu ụwa, yana mkpa ikpé dị na Crucified, enweghị ike ime ka onwe ya nwụọ na ebe ya.
N'ekpere oku ya (Jọn 17), Jizọs kpọrọ Chineke “Nna dị nsọ”. N’okwu ndị a, anyị na-ahụ echiche dị omimi banyere eziomume Chineke. Onye Okike jupụtara n’ịhụnanya na eziokwu. Onweghị ịhụnanya na-ezighi ezi ọ bụla, kama ọ na-ewulite ebere ya n'ikpe ziri ezi. Na onwu nke Kraist, ihe nile nke akparamagwa nke Chineke na adi n'otu. Lovehụnanya a akparaghị ókè, nke e wukwasịrị ikike ziri ezi, bụ ihe anyị na-akpọ "amara", n'ihi na enyere anyị ya site n'onye ezi omume, ebe ọ bụ na Chineke na-eme ezi omume n'agbanyeghị na ọ hụrụ anyị n'anya ma na-agbaghara anyị.
EKPERE: O Nsọ Atọke; Nna, Ọkpara, na Mụọ Nsọ, anyị na-efe gị ofufe, n'ihi na ịhụnanya gị karịrị nghọta niile, ịdị nsọ gị dịkwa omimi karịa oke osimiri. Redeem gbapụtara anyị site na mmehie niile, site na ọnwụ, na ikike nke ekwensu, ọ bụghị site na ọla ọcha ma ọ bụ ọla edo, kama site na oke nhụjuanya nke Kraịst na ọnwụ ya na osisi ahụ a bụrụ ọnụ. Ọbara ya dị oké ọnụ ahịa sachara anyị mmehie anyị niile, anyị abụrụ ndị ezi omume na ndị nsọ site n'amara. Anyị na-asọpụrụ aja nke Jizọs, ma nyefee onwe anyị n’aka gị, na-ekele gị maka mgbapụta gị n’igosipụta na anyị bụ ndị ezi omume.
Gini bu okwu a: “igosi ezi omume Chineke”?
Ha niile emehiewo
Ọ dighi ebube nke Chineke.
na-agu n'onye ezi omume site na amara
Yasite na ngbaputa nke di n’ime Kraist Jizos
(Ndi Rom 3:23-24)
Page last modified on January 26, 2021, at 06:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)